Ungangibonisa indlela efanele yokuthola i-backlink ye-PR10 mahhala?
Lona ngumbuzo ofanele ngoba uyamukelwa ukuthi uxhumanisa negunya eliphakeme kakhulu lesizinda kanye namanani we-PageRank (njenge-backlink PR5-PR10) angathola kuphela kunokuthenga. Yebo, kunjalo, kunezinhlinzeko eziningi ezahlukene ezibonwe kuwebhu, ngezinhlobo ezahlukene zezixhumanisi, ngisho nama-backlink angu-PR10 angatholakala kalula ekuthengisweni. Noma kunjalo, ngo-99 - kanger ssocc review. Amacala angu-9%, la "okunikezwayo" akuyona into kodwa ama-tricks asetshenziswa abakwa-scammer ukuze benze inzuzo. Awufuni iwebhusayithi yakho noma ibhulogi ukuthi ifinyelele isijeziso esinamandla sokusezingeni eliphansi elikhokhelwayo ngemuva kokuningi, akunjalo? Khumbula, uma kuziwa ekwakheni isixhumanisi esihle ku-SEO - ikhwalithi njalo indaba, hhayi ubuningi. Ngisho ukuthi ukuthola ama-backlinks angu-PR10 ambalwa, isibonelo kusuka kumawebhusayithi ezemfundo nakwahulumeni noma eminye imithombo ephezulu ethembekile ngaso sonke isikhathi ingcono kunezinhloso ze-SEO, kunokuba kutholakale izixuku ze-backlink ezisezingeni eliphezulu, ngaphandle kokuqonda okucacile komgomo oyinhloko kanye nokusebenza kwabo kwangempela. Nakhu ukuthi ungathola kanjani izixhumanisi ezengeziwe ezinamandla ze-SEO, kanye nama-backlink angu-PR 10 - Yebo, kunezindlela ezimbalwa ezinhle kakhulu zokukusiza ngaleyo ndlela. Phakathi kwabanye, ngincoma ukuzama ubufakazi, izibuyekezo, iziphakamiso, izivakashi ze-Guest, ne-Infographics. Kodwa into ukuthi i-backlink ye-PR10 ingabanjwa kusukela kuhulumeni, noma imithombo yemfundo kuphela. Kulo nyaka sengivele ngiphumelele ukuthola ezinye izixhumanisi ezibalulekile ikakhulukazi ezivela ekugcineni - futhi ungase uzame ukuthola ama-backlink we-PR8-PR10 avela kumawebhusayithi we-EDU - noma ukwenza ukwenza kabanzi, noma ukusebenzisa ama-scholarships.
Ngokuvamile, zonke izikhungo zemfundo ezihlonishwayo, ezingagcini nje ngamayunivesithi namakholeji, azisebenzisi nje kuphela iwebhusayithi. amakhasi ezinsizakalo anezixhumanisi eziningi ezikhomba emuva izinsiza ezibonakala kakhulu eziwusizo kubo bonke - kokubili abafundi, kanye nothisha babo. Yingakho ukusebenza ngokuqhubekayo ukuze uqaphele futhi kufakwe kulezi zincwadi zamithombo ukuze kusetshenziswe esikhathini esizayo kungaba yindlela enhle yokuthola i-backlink eyigugu kakhulu ngaphandle kokukhokha idola, okungenani ngqo. Ngincoma ukusingatha ukufinyeleleka okubanzi nge-imeyili ukunikeza izixazululo ezithile eziwusizo ezihlobene nembonini yakho, isibonelo, umklamo wewebhu, ucwaningo oluzenzakalelayo, njll.Futhi-ke, uzobukeka njengogaxekile. Noma kunjalo, ukuthola ngisho nama-5-10% wezimpendulo eziqondile ukuthumela isixhumanisi sakho siphenduka le nqubo ibe yinto enengqondo ngempela, akunjalo?
Leli hlelo ngeke lidinge isikhathi sakho kanye nemizamo kodwa inani elithile lokusebenzisa imali. Kuhilela ukudala nokukhuthaza ukufundiswa ukuze uthole le-backlink efanelwe i-dot EDU ngokubuyisela. Uma ulungele ukusebenza ku-scholarship indlela ejulile, lawa amaphuzu amathathu amakhulu okuhambisa umsebenzi:
Yakha ikhasi ukuze unikeze incazelo ejwayelekile ye-scholarship ngokwayo, futhi unikeze ukugcwaliswa -fomu lesicelo ukubandakanya abahlanganyeli abafanelekayo.
Ukukhomba amanyuvesi azayo noma amakolishi usebenzisa izintambo zokusesha eziphambili nge "scholarship" ezithathwe njengegama elingukhiye eliyinhloko.
Gcwalisa ukufinyeleleka nge-imeyili ehloniphekile - futhi ukhululekile ukugijima bese uqala ukusebenza ukuze wakhe ukufundiswa kwangempela nabanqobile kanye nemivuzo.